बैंकर बन्ने सपना बोकेकी परिणीति चोपडा कसरी बनिन् बलिउडकै चर्चित नायिका ? – OSNepal
बैंकर बन्ने सपना बोकेकी परिणीति चोपडा कसरी बनिन् बलिउडकै चर्चित नायिका ?
काठमाडौं, ७ कात्तिक- बलिउड अभिनेत्री परिणीति चोपडा केही समययता नेपालमा छिन् । उनी राजश्री प्रोडक्सनको व्यानरमा बनिरहेको फिल्म ‘उचाइ’ को छायांकनका लागि नेपाल आएकी हुन् । शुक्रबारदेखि ३३ वर्ष लागेकी परिणीतिले यसपटक जन्मोत्सव फिल्म युनिटसँगै मनाङमा मनाइन । हिमाली जिल्ला मनाङमा शुक्रबार उनी आठ दिने सेड्युलका लागि पुगेकी हुन् । सम्भवत: फिल्म युनिटको यो अन्तिम सेड्युल हो नेपालमा ।